नेता, नेतृत्व र विरक्त नेपाली राजनीति « Nepal Bahas
नेता, नेतृत्व र विरक्त नेपाली राजनीति
प्रकाशित मिति : १७ आश्विन २०७८, आईतवार १८:२०
खासै ख्यालै भएन । बचपनको कुरा पौने बुढ्यौलीमा सम्झनै नसकिने । म चानचुन ११, १२ वर्षको हुँदो हुँ सायद । वि.सं.२०३९ र ०४० सालतिरका मेरा मन खाने र डरलाग्दा सर हुनुहुन्थ्यो, टेकबहादुर खत्री । उतिखेर सर भनेसी विद्यार्थी र अभिभावकको सातो नै उड्थ्यो । उसैमा जवानीले रंगिएका मेरा सर । कसको पो आँट चल्थ्यो र सिधा हेर्न । हामी नाकले किताब छुने गरि निहुरिन्थ्यौ । साथीभाईले पछाडीबाट सुईरोले घोपी राख्थे । न त खित्का रोकिन्थ्यो न त सरको कोर्रा हाम्रो ढाडमा ।
पुरै हिउँद कटाउने ट्यार्लिनको कमिज र कालो जिनको जाँघेले कोर्रा जसका तस घर पुगाउंथ्यो । कैयौं दिन आमाहरुले गाईको घ्यू र तेल लगाएर सरले पाप्री परेका हाम्रा निलडामहरु रंङ्ग्याउनु भएको छ । कोही बोल्थेनन् सरकाे अघि उति बेला । न हामी, न त बाआमाहरु । भनेको मान्नु नै सिकाईको अचुक ओखती मानिन्थ्यो उतिबेला । अहिले पो शिक्षामा चरम लोकतन्त्र आयो !
जाडाे महिना, मंसिरको दिन थियो । हामी क्यारम खेल्दैथ्यौं । सुकिलो सेतो सर्ट र निलो पाईन्टमा नयाँ मोटा हात्तीछाप चप्पल पट्काउँदै सर आउनु भो । खाली खुट्टाको स्कुले म अनवरत घोत्लिरहें सरका पट्किने चप्पल हेरेर । सरले पहिलो दिन भएर होला खुबै पट्काउनु भो चप्पल । मोटा हात्तीछाप चप्पल बिरलै भेटिने । हुने खानेले नै लाउन पाउंथे । चर्चरी फुटेका खाली खुट्टाका कोमल भुंईतलाहरुले उसबेला यस्ता चप्पल देख्नु कम्ता थिएन । खै ! किन र कसरी हो सरले उर्दि दिनु भो ‘मौसुफ सरकारले नेपाललाई स्वीजरल्याण्ड जस्तै बनाउने घोषणा गरिबक्सेको छ ।’ मेरो ध्यान चप्पलको चालमा अनि अरु साथीहरु खसमस र खित्कामा । के सुन्नु ! के बुझ्नु ! सरको घरमा रेडियो थियो । सायद वहाँलाई नै थाहा भहोला ।
आन्दोलनमा सरिक अग्रज साथीहरु र गुरुहरुबाट पंचायत र मण्डलेबाट सावधान हुनु भन्ने सुनिन्थ्यो । विरोध, विद्रोह र नाराबाजीमा तत्कालिन राजारानीका नाममा स्वीस बैंकमा अथाह रकम राखेको जब सुने अनि मेरो मान्यवर शिक्षक टेकबहादुर खत्रीले दिएको ‘मौसुफ सरकारले नेपाललाई स्वीजरल्याण्ड बनाउने सपना’ चकनाचुर भयो । मलाई लाग्यो सर र राजा नि ठग्दा रैछन् । मेरो आस्था, मन र पंचायत एकैचोटि गर्लम्म ढल्यो ।
भोलिपल्ट काला जुत्तामा सजिएर उही सर आउनु भो । शुरुमै रामे र बमबहादुरले एकएक कोर्रा खाएसी पुरै कक्षा रन्थनियो । हामी सबै घरघरबाट लगेका गुन्द्री, बोरा र बिंणामा बस्यौं । उस बेलाका नाजुक स्कुलहरु न भवन थिए गतिला न त फर्निचर नै । सरले आज फेरि मौसुफ वीरेन्द्र सरकारले भनेको उस्तै अर्को कुरो कोट्याउनु भो, ‘मौसुफ सरकारले नेपाललाई एशियाली मापदण्डमा लैजाने रे ! हामीलाई सोध्ने आँटै भएन । स्वीजरल्याण्ड कस्तो छ ? एशियाली मापदण्ड के हो ? सरले सके र जाने जति भन्दै जानु भो । यो एक स्वर्णिम वर्णन थियो बाल मगजमा । हाम्रो कलिलो मगजका निम्ति नेपाललाई एशियाली र स्वीजरल्याण्डको मापदण्डमा लैजाने कुरा जटिल थिए । यद्धपि सरले पुरै कक्षा रसिक र स्वर्णिम बनाए ।
बालापन थियो हाम्रो । हामीलाई न त नेता हुनु थियो न अरु केही । खाली क्यारम, घुंयत्रो, डण्डिबियो र कबड्डिको चरिबाज हुनुथ्यो । उता भने मौसुफको पंचायत भित्र असन्तोष, जनविद्रोह, सत्याग्रह मडारिइरहेको थियो । हामी सबैलाई एकै देख्थ्यौं तर राज्यभित्र अनेक थरि रहेछन् । सुधारिएको पंचायत अनि उघारिएका बहुदलवादीहरु बीचै बीच हाम्रा अबोध बालापनहरु अघि बढिरहे ।
स्कुले जीवनको अन्ततिर अर्थात कक्षा ९ पुगेसि श्री चुरे मा. वि. बगनाह पुगियो । यतिबेला उमेरले जुंघाको कालो रेखि चढाईसकेको थियो । जिल्लाकै स्थापित विद्यालय अनि नामुद सरहरु । असलीमा कृष्णप्रसाद पौड्याल सर जिल्ला मै स्थापित हेडसर र असल संरक्षक हुनुहुन्थ्यो अनि बगनाह स्कुल भनेसी धुव्र शाह सर नछुट्ने नाम, निडर र रवाफिला पनि । विद्यालयमा मान्यवर धेरै गुरुहरु भएपनि अलिक राजनैतिक चेष्टावान भने मदन ज्ञावली , राममणि शर्मा र टिकाराम बञ्जाडे सरमा पाईन्थ्यो भने तिलकप्रसाद शर्मा र भोजराज पण्डित सर गौप्राणी जस्तै सोझा ।
यौवनावस्थाको स्कुले जीवन । मदन ज्ञावली सरको चिनियाँमान काजी, राममणि सरको बुर्जुवा शिक्षा र टिकाराम बञ्जाडे सरको आन्दोलनको उक्साहट र पंचायति दण्डको बयानले जोश र होस दुवै बर्बराई रहन्थे कक्षामा । यिनै कुराले बाक्ला किताबहरुमा कालो झण्डा ,कालो पट्टि बोकिन्थ्यो उसबेला । आन्दोलनमा सरिक अग्रज साथीहरु र गुरुहरुबाट पंचायत र मण्डलेबाट सावधान हुनु भन्ने सुनिन्थ्यो । विरोध, विद्रोह र नाराबाजीमा तत्कालिन राजारानीका नाममा स्वीस बैंकमा अथाह रकम राखेको जब सुने अनि मेरो मान्यवर शिक्षक टेकबहादुर खत्रीले दिएको ‘मौसुफ सरकारले नेपाललाई स्वीजरल्याण्ड बनाउने सपना’ चकनाचुर भयो । मलाई लाग्यो सर र राजा नि ठग्दा रैछन् । मेरो आस्था, मन र पंचायत एकैचोटि गर्लम्म ढल्यो ।
वि.सं. २०४६ ताका प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनामा बर्दियामा आन्दोलित हुने पहिलो शैक्षिक संस्था बनेको थ्यो श्री चुरे मा.वि. । उमेरसँगै बढ्दो जागरण चेत, शिक्षा र परिपक्वताले राजनीति, सरकार संचालन, दल गठन-विघटन, सत्ता लुलुप्ता र राजनीतिक अनुशासनहिनताका कारण नेपाली राजनीतिमा देखिएका उदासिन क्षणहरु बुझ्दै जान थाल्यो ।
प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात नेपाली राजनीतिमा अक्सर अधिक समय नेपाली कांग्रेसले राज गर्यो । अन्तरिम, आवधिक र मध्यावधिबाट सरकारहरु बने अनि भत्किए । यसमा खास अरु कसैको नभै प्रजातन्त्रको ऐतिहासिक विरासत बोकेको नेपाली कांग्रेस भित्रै छत्तिसे, चौहत्तरे, सुरासुन्दरी, किनबेच काण्डहरुले सरकार बन्ने र भत्किने भई रह्यो । प्रजातन्त्रका महासेनानी गणेशमान सिंह र सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईमा देखिएको विरक्तिलो राजनीतिक सन्यासले जनभावनामा चोट पुर्यायो । यसबाट एकातिर अधिक जनमतले गठन भएका सरकारबाट गरिने जनअपेक्षा र राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसक्दा नेपाली राजनीतिमा एक किसिमको निराशाको बिजारोपण हुँदै गयो भने अर्कोतिर बामपन्थीलाई अंकुरणको सेपिलो गोरेटो मिल्दै गयो ।
माओवादी दर्शन र वर्गसंघर्ष लक्षित शिक्षाबाट निर्देशित हुँदै ४१ सुत्रीय माग राखी माओवादीबाट जनविद्रोह र जनयुद्ध छेडियो । टाउकाहरुका मुल्य तोकिए । निहत्था जनता, शिक्षक, कर्मचारी लखेटिए अनि रेटिए । कैयौं सेना, प्रहरी र युद्धकर्मीहरुले शाहदात प्राप्त गरे । गाउँहरु रित्तिए । मठमन्दिर ,पुलपुलेसा, शिक्षालय, पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक सम्पदाहरु तोडिए । भय र सन्त्रासको तुवाँलो नेपाली राजनीतिक आकाशमा मडारिरह्यो । विकासका नाउँमा विनासै विनाश झेल्यो नेपालले । उपलब्धि शुन्य ।
उतिखेर कम्युनिष्ट अर्थात बामपन्थी धार अलि हेपिएको र चेपिएको अवस्थामा हुन्थे । चुलोचौको र जन्ती-मलामीमा बामपन्थीको उपस्थितिमा मजाक हुन्थ्यो । मानौं उनीहरु बृद्ध, बालक, अशक्तलाई स्वीकार्दैनन् । उद्दण्ड हुन् । गोली ठोक्छन् । गाई मार्छन् , खान्छन् । चिनियाँ क्रान्तिमा झैं डोजरले चेप्छन् अनि गोली हानेर मार्छन् । यति बिध्न लान्छाना, त्रास भित्रैबाट बढेको बाम प्रशिक्षण र मुख्यतया कांग्रेसको आन्तरिक किचलोबाट गठित विघठित सरकारहरुको बीच चरोबाट ने.क. पा. ‘एमाले’ ले नेपालको इतिहासमा पहिलो अल्पमतको सरकार बनाउन सफल भयो ।
बृद्धभत्ता, स्थानिय निकायलाई निश्चित बजेटको सुनिश्चितता, आफ्नो गाउँ आफै बनाउं अभियान जस्ता केही लोककल्याणकारी कार्यले समग्र बामपन्थीमाथिको लान्छना र शंकालाई पखाल्दै शिर उंभो र लोकप्रियता दिलायो । यसैको जगमा जनविद्रोह र बाम प्रशिक्षणहरु मौलाए अनि सरकार गठनका अवसरहरु र विश्वासको धरातल दिलायो । त्यसैले त अहिलेसम्म स्व. मनमोहन अधिकारी र भरतमोहन अधिकारी सबैको मनमनमा छन् ।
वि.सं. २००७ देखि २०१७ सम्म आउदा नेपाली कांग्रेसले एकछत्र शासनको अवसर पायो । मातृकाप्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य, डा.के.आई. सिंह, बीपी कोइराला लगायतले सरकारको नेतृत्वको अवसर पाउनु भो । कांग्रेसको दुई तिहाईको सरकार बन्यो अनि भत्कियो । राजनीतिक व्यवस्थापनको अभाव, पार्टीभित्रकै अन्तरकलह र सरकार संचालनको अपरिपक्वताका कारण प्रजातन्त्रका शुरुवाती यी १० वर्षहरु अनुत्पादक भए अनि २०१७ सालको काण्ड घट्यो । ठीक बेठीक बहसका झण्डै ३० वर्ष निर्दलीय पंचायतले शासन गर्यो । यस अवधिमा पनि असन्तोषका लहरहरुले जनमत संग्रह , सत्याग्रह, बमकाण्ड र जनआन्दोलन भित्र्याई रह्यो ।
चिराचिरा र केस्राकेस्रा हुँदै बामे लिङ्गे पिङ्को डोरी १,२,३ हुँदै टुक्रियो । नौलो जनवाद, जबज, माओवाद र मार्क्सवादको संयुक्त खिचडीले न मौलिक स्वाद दिन सक्यो न त साझा पहिचान नै । जनयुद्धको धङ्धङ्गी नछुटेको माओवाद र लोकतान्त्रिक विरासतको उन्माद बोकेको एमाले बीच राजनीतिक र भावनात्मक एकताको मिलन बिन्दु नै तय हुन सकेन ।
पंचायती शासनले धमिल्याएको राजतन्त्रमा दरबार हत्याकाण्ड र सोपछि राजा ज्ञानेन्द्रको शासन कौशलताको कमीका कारण पार्टीहरु क्षणिक अवधिभर बन्देज जस्तै बनाई तुलसी गिरी र किर्तिनिधिहरु जब भित्र्याईयो तब पृथक राजनीतिक धुव्रका कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत अन्य साना मसिना दलहरु एक भइ शाही शासनकाल र राजसंस्थाको अन्त्य भयो ।
बृहत शान्ति सम्झौता, १२ बुँदे सहमति हुँदै विद्रोही मोर्चाबाट माओवादीले सुरक्षित अवतरण पायो । हजारौं बिस्थापितहरु र शहिदहरुले शोकाकुल नेपाली राजनैतिक धरातलमा नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३, गणतन्त्रको स्थापना र शान्तिको संकेत गर्दै बम, गोला, बारुदहरुले युद्ध विश्राम गरे । अनमिन र क्यान्टोनमेण्टसम्म पुग्दा देशको शासन र असन्तुलित धुर्मैलो राजनैतिक नेपाली आकशमा आमुल फेरबदल भैसकेको थियो ।
कहिले पूरा होलान, खाडीमा बेचिने युवाका सपनाहरु ? कहिले होला लोककल्याणकारी राज्य मेरो ? कहिले र कसरी सुध्रेलान पार्टीको समाज मिलाउन र अटाउन नसकि समाजवादको कल्पना गर्ने मेरा नेताहरु ? मेरो सरले भने झैं मेरो देश न स्वीजरल्याण्ड बन्यो न त पुग्यो एशियाली मापदण्डमा ।
टुटफुट र अस्थिर राजनीतिबाट हण्डर खाएको नेपाली शासन पद्दतिलाई सशक्त बनाउँदै दिल्लीमा त्रि-पक्षीय सम्झौताबाट उद्धेलितहरुबाट नेपाली जनताका जनप्रतिनिधिबाटै संविधानको लेखन गर्ने लक्ष्य मुताबिक संविधानसभाका पटकपटकका चुनावहरु, विशाल संख्यामा सभासदहरु र सरकारहरु बनिरहे । रुग्ण नेपाली अर्थतन्त्रले शान्ति, अमनचयन, दिगो विकास, समता, समानता, समावेशिताको रहरिलो शासन व्यवस्थामुलक सपनाको आशै आशमा थेगिरह्यो । उल्लास र उत्साहपुर्वक जारी भएको अपेक्षित नेपालको संविधान-२०७२ पछि सिर्जित सबैखाले बाधा अड्चनहरु सहँदै नेपाली जनताहरुले साथ दिई रहे । टुटफुट र गुट उपगुटको राजनैतिक किचलोबाट देशलाई बचाउन थ्रेसहोल्ड र दल विभाजनको कडा नीति ल्याईयो । यतिखेर नेपाली राजनीति आदर्शमय बन्दै गयो ।
परन्तु बाम एकताका नाममा एकताकाको चुनावी विजयी उत्साह, शक्ति र सामर्थ्य लक्ष्यमा नपुग्दै आफै मक्कियो । चिराचिरा र केस्राकेस्रा हुँदै बामे लिङ्गे पिङ्को डोरी १,२,३ हुँदै टुक्रियो । नौलो जनवाद, जबज, माओवाद र मार्क्सवादको संयुक्त खिचडीले न मौलिक स्वाद दिन सक्यो न त साझा पहिचान नै । जनयुद्धको धङ्धङ्गी नछुटेको माओवाद र लोकतान्त्रिक विरासतको उन्माद बोकेको एमाले बीच राजनीतिक र भावनात्मक एकताको मिलन बिन्दु नै तय हुन सकेन ।
जनयुद्धको सैद्धान्तिक लिग छोडेको नेपाली माओवादी र सत्तालिप्साले स्वांठिएको एमाले बीच गठबन्धन बाहेकको कल्पना नगरिनु पर्थ्यो । हत्याउने, लत्याउने र सकेजति भत्काउने आपसी खेलहरु खेलिए । पार्टीको लोकतान्त्रिक पद्धति नभै सहकर्मिको काल पर्खिने अनि बाहुला सुर्किने तिकडमहरुले नेपाली बाम आस्थापन्थीहरुलाई चोट र आश्चार्यमा पारी रह्यो । साँढेसँग साँढे जुधे झैं नेकपाका बज्रस्वांठ तत्कालीन सरकार आपसमा लडिरहे । उनका अघि निरीह प्रतिपक्षहरुको रत्ति दाल गलेन । बरु थिचिएको अवस्थामा पत्याउनै नसकिने गरि ठसठसी गन्हायो बाम सरकार र एकताको क्षणिक इतिहास । मानौं यो परिकार परिवारमै अरुच्य भईसक्यो ।
चिरिएको नेकपा, फक्लेटिएको एमाले र झण्डै दुईतिहाईको भत्किएको बाम सरकारको समग्र तुलना गर्दा आफ्नो घरधुरीको आगो आफै तापेको देखियो, जुन कष्ट कांग्रेसले २००७/२०१७ सम्म भोगेको थियो । नेपाली जनताले पटक पटक यस्ता ठुला र ऐतिहासिक विरासत बोकेका पार्टीहरुलाई स्थिरताका लागि दिएको जनमतको कदर नहुँदा अब के का लागि दिने ? अनि कसरी माग्ने होलान जनमत ?
यसरी हेर्दा सत्तालिप्सा, राजनीतिक अराजकता, नीतिथितिमा बेथिति, गैरअवसरको चरम दोहन र बेरोजगारीको जगमा उभिएको छ नेपाली राजनीति । हिजोका ती दिनमा मेरा मान्यवर गुरुहरुले भनेका राजनैतिक कुरा, त्यो मेरो विद्यालय चुरे मा.वि.ले जगाएको भावना, उमेरले दिएको सिकाई अनि मेरो प्यारो खत्री सरले मेरो बालमगजमा भरेका सपनाहरु मेरो स्मृतिपट भरि छन् ।
कहिले पूरा होलान, खाडीमा बेचिने युवाका सपनाहरु ? कहिले होला लोककल्याणकारी राज्य मेरो ? कहिले र कसरी सुध्रेलान पार्टीको समाज मिलाउन र अटाउन नसकि समाजवादको कल्पना गर्ने मेरा नेताहरु ? मेरो सरले भने झैं मेरो देश न स्वीजरल्याण्ड बन्यो न त पुग्यो एशियाली मापदण्डमा । बरु नेपाली राजनीति बोझिलो र विरक्तिलो बन्दै गयो नेपाली मानसपटमा !!!!